Myat Min Lu – Medium
Published in VECTOR.com.mm
How to fix zsh command not found flutter
How to Shrinker may have failed to optimize the Java bytecode in Flutter
When you run your Flutter you will see this.
BUILD FAILED in 9s Running Gradle task 'assembleDebug'...
Running Gradle task 'assembleDebug'... Done 11.0s [!] The shrinker may have failed to optimize the Java bytecode. To disable the shrinker, pass the--no-shrinkflag to this command. To learn more, see: https://developer.android.com/studio/build/shrink-code Gradle task assembleDebug failed with exit code 1
Here is the way of solving.
Step 1: Change some codes in located android/app/build.gradle to this
// TODO: Add your own signing config for the release build.
// Signing with the debug keys for now, so `flutter run --release` works.
Step 2: Change minSdkVersion 16 to 21
How to fix iOS crash during the start Firebase configure in Flutter?
If you see this kind of error log, read continue
Running Xcode clean...                                       1.1s
├─Assembling Flutter resources...                    1.7s
└─Compiling, linking and signing...                  7.8s
Xcode build done.                                           15.4s
4.13.0 - [Firebase/Core][I-COR000003] The default Firebase app has not yet been configured. Add `[FIRApp configure];` (`FirebaseApp.configure()` in Swift) to your application initialization. Read more: https://goo.gl/ctyzm8.
0   CoreFoundation                      0x0000000106a3c1e6 __exceptionPreprocess + 294
1   libobjc.A.dylib …
How to fix import firebase files not found in Flutter?
error in xcode
Remove all Pod Folder, Podfile, and Podfil.lock from <ios folder> and then run
After that only run with this command first before click on “run” button of IDE
How to fix pod install fails with json error on Mac OS in Flutter
Run this commands on terminal.
rm -rf ~/.cocoapods/repos/trunk/
rm rf ~/.cocoapods/repos/Spec_Lock
How to Remove and Re-install cocoapods in Flutter
Go to your terminal and type all those commands
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းနေတယ်လို ထင်ပါသလား?
မည်သူမှ မွေးကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်မပါ ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို သိမ်ငယ်တာမျိုး၊ ကိုယ်လုပ်လိုက်ရင် မှားများ မှားသွားမလားဆိုတဲ့ တွေဝေဒွိဟ စိတ်တွေကိုလည်း တိုးပွားစေပါတယ်။ အရာရာဟာ “တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး” ဆိုတဲ့အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းနေသူတွေအတွက် ဘယ်လို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲဆိုတာလေးတွေကို တင်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပုံဖော်ကြည့်ပါ
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ သူများတွေကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာပဲ စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ပြန်ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ ဉပမာအနေနဲ့ — ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းတယ်လို့ မြင်လား? ဆိုးတယ်လို့မြင်လား? တော်တယ်လို့ မြင်လား? ညံ့တယ်လို့ မြင်လား? …
အလုပ်ဖြစ်အောင် Plan ဆွဲနည်း!
ဘယ်နေ့မှာ ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Plan တွေချဖူးကြမှာပါ။ သို့သော်လည်း မိမိ Plan အတိုင်းလုပ်ဖြစ်တာက ပထမ ၁ရက် ၂ရက် (သို့) ၁ ပတ်၊ ၂ ပတ်လောက်သာ ကြာပြီး နောက်တော့လည်း ဒုံရင်းပဲ ပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Plan တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အလုပ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ မိမိလုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေ အကုန်လုံးကိုချရေးပါ
ဒီလိုရေးချလိုက်ခြင်း စိတ်ကိုတော်တော် ပေါ့ပါးသွားစေသလို မိမိလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာသွားစေပါတယ်။ အသေးအဖွဲ့ကအစ ချရေးလိုက်ပါ။
၂။ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို အုပ်စုခွဲလိုက်ပါ
ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပြီး အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့လိုက်ခြင်းဟာ မိမိ Planကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်စေဖို့ အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဦးစားပေးနံပါတ်လေးတွေ တပ်လိုက်ပါ
အုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးသွားရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့အုပ်စု၊ အရေးသိပ်မကြီးတဲ့ အုပ်စုတွေကို နံပါတ်လေးတွေတပ်ပြီး ဦးစားပေးစာရင်းတစ်ခု ပြုစုလိုက်ပါ။ ဒါမှသာ ကိုယ့်အတွက် အရေးမကြီးတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ အချိန်မကုန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ပြီးစီးမည့် ခန့်မှန်းခြေ ရက်တွေနဲ့ အချိန်တွေကို ထပ်မံသတ်မှတ်ပေးပါ
ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် မိမိအနေနဲ့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း မပြီး ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ မသိစိတ်ကလှုံ့ဆော် ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေ ကန့်သတ်ချက်မထားပဲ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေက ဘယ်တော့ မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ဖြစ်နတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချက်ဟာလည်း အရေးကြီး အချက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ့် Plan ကို လေးစားပါ၊ ဖြစ်နိုင်သလောက် အတိအကျလိုက်နာပါ
တရက်တာ အလုပ်တွေက အစပြုလို့ အသေးစိတ် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေးစားရာရောက်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း တိုးပွားလာစေပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် လေးစားမှု၊​ ယုံကြည်မှုမရှိရင် တခြားသူတွေရဲ့ လေးစားယုံကြည်မှုကို ရရှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
ဖော်ပြခဲ့အချက်လေးတွေကို အချိန် ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက်လောက်ပေးပြီး ရေးဆွဲကြည့်လိုက် တကယ်အကျိုးထူးတာ သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
Myat Min Lu @ Kaung Thit
Founder of VECTOR Online Learning Platform
The Secret way to Faster Productivity
သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အလုပ္ကိုစၿပီး လုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနတဲ့အခါ
ဘာမွမလုပ္တာထက္စာ အလုပ္ေတြပိုၿပီး ၿပီးေျမာက္သြားတာေပါ့။
သင့္ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ေလးကိုလည္း မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေရးေပးသြားအုံးေနာ္!
သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အလုပ်ကိုစပြီး လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အခါ
ဘာမှမလုပ်တာထက်စာ အလုပ်တွေပိုပြီး ပြီးမြောက်သွားတာပေါ့။
သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးကိုလည်း မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးသွားအုံးနော်!
The secret way to faster productivity growth:
If you can do it NOW, just do it.
This is the the best flyer design tutorial(inasimple way) for you.
For more tutorials subscribe and follow on:
Founder of VECTOR Online Learning Platform https://vector.com.mm